Samantha Power oo booqanaysa Galbeedka Afrika - Cakaara News
(CN) Axad Oct,26.2014.Haweenayda Wakiilka Qaramada Midoobay u fadhida Mareykanka, Samantha Power ayaa booqanaysa Saddex waddan oo ku yaala Galbeedka Afrika kuwaasoo la tacaalaya cudurka Ebola oo fara kulul ku haya shacabka ku nool bilihii ugu danbeeyay. Wadammada ay samantha ku sii wajahan tahay ayaa kala ah Guinea, Liberia iyo Sierra Leone oo ah waddamada uu faraha ba’an ku hayo cudurkan aduunka ku cusub ee lagu magacaabo Ebola.
Samantha Power waxay sheegtay in ay ku dadaali doonto sidii loogu heli lahaa wadamadan taageero dheeraad ah oo heer caalami ah si wax looga qabto mushkiladda ka dhalatay cudurkan.
Booqashadan ayaa waxay noqonaysaa sarkaalkii ugu sareeyey ee ila haatan booqda Galbeedka Afrika si wax looga qabto Ebola. Mareykanka ayaa Ciidan gaaraya afar kun u dirayaa Galbeedka Afrika. kuwaasoo Qaar ka mid ahi ay gaadheen dalka Liberia.
Hay’adda caafimaadka Aduunka ee WHO ayaa sheegaysa in kiisaska la diiwaan-geliyey ee dadka uu ku dhacay cudurka ay kor u dhaafayso toban kun oo qof. Waxaana cudurka u dhintay ku dhowaad shan kun oo qof. Dalka Mali ayaa noqday waddankii ugu dambeeyey ee qof uu ugu dhinto cudurkan.
WHO ayaa sidoo kale tijaabinaysa talaal la doonayo in looga hortago faafida cudurka.